Amawpyay Comprehensive up-to-date news
သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး
သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အယုတ်ညံ့ ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာ လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်.. ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး သူတစ်ပါးမိသားစုကို ဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ ဖောက်ပြန်တဲ့သူ တွေခံစားရမယ့် အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ… (၁) ပူလောင်ခြင်း … သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲတဲ့သူတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ သူတွေ အမြဲတမ်းခံစားနေရမယ့် အရာကတော့ ပူလောင် ခြင်းပါပဲ သူတို့ရင်ထဲမှာ နောင်တရသလိုလို၊ ကျေနပ်သလိုလို မှားနေသလိုလို၊ မှန်နေပြန်သလိုလို မသေချာမရေရာ …
ကြောင် ချစ် တယ် ကြောင် ချစ်တယ် နဲ့ ကြောင်သန်းကိုက် ရင် အသက် ပါဆုံးနိုင်တာ သိပါလား…?
ကြောင် ချစ် တယ် ကြောင် ချစ်တယ် နဲ့ ကြောင်သန်းကိုက် ရင် အသက် ပါဆုံးနိုင်တာ သိပါလား…? ၁၆ နှစ် အရွယ် ကျောင်းသူလေး ကြောင်သန်းကိုက်ခံရကာသေဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံ ဖတ်ချာဘန် စီရင်စုက အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးတစ်ဦး ကြောင်သန်းကိုက်ခံရရာမှတစ်ဆင့် သွေးအဆိပ်သင့်ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၆ ရက် က သေဆုံးသွားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ‘ဆူနီဆာ’ လို့ အမည်ရတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ မိသားစုတွေဟာ ကြောင်ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ကြောင်အတော်များများ အိမ်မှာ မွေးမြူထားပါတယ်။ ‘ဆူနီဆာ’ ဟာ အဲဒီကြောင်တွေထဲက တစ်ကောင်ရဲ့ ကြောင်သန်း ကိုက်ခံရပြီး ကိုယ်ပူခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ယားယံခြင်း၊ အရိုးအဆစ်ကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး …
Google Chrome သုံးသူမ်ားအတြက္ အထူးသတိေပးခ်က္ Google ထုတ္ျပန္
Google Chrome သုံးသူများအတွက် အထူးသတိပေးချက် Google ထုတ်ပြန် Zero-Day Exploit ထပ် ကြုံတာပါ သုံးစွဲသူ သန်း ၂၆၀၀ ကျော် ရှိတဲ့ Google Chrome သုံးစွဲသူတွေအတွက် အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အဆင့်မြင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု သတိပေးချက်တစ်ရပ်ကို Google က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Google Chrome ဟာ CVE-2021-37973 တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ကြုံနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကို အချိန်လွန်ပြီးမှ သိတာ ဖြစ်လို့ ဒါကို Zero-Day Exploit (ဖောက်ထွင်းခံရကြောင်း Google မသိခင် နဲ့ လုံခြုံရေး patch မထုတ်နိုင်ခင် ဝင်ရောက်မွှေနှောက်သွားခြင်း) လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ အခုဆို ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ …
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ … အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူလည်း ပေါများတယ် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ် လုပ်ချင်တာကို ကြိုးစားလုပ်တတ်တယ်။ ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ မရှိ ရှိတာ လှူ ဒါန်းတတ်တယ်။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။ ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။ စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။ အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။ သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။ Crd Julia Zawgyi ေျခညႇိဳးက ေျခမထက္ ရွည္ေနတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ၾကည့္ပါ ေျခညႇိဳးက …
တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးအဖြစ် အရိုးထုတ်ရမယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ လက္ခဏာများ…
တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးအဖြစ် အရိုးထုတ်ရမယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ လက္ခဏာများ… ဒီအချက် တွေနဲ့ ကိုက်ညီရင် အပျိုကြီး ဖြစ်မယ် လို့ မပြောဘူးနော် -ဒါမဲ့ အပျိုကြီး ဖြစ်နေသူ တွေကတော့ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီ နေတာ သေချာပါတယ် 1=ရည်းစားစကား ပြောခံရသည်ကို နှစ်သက်သော်လည်း အဖြေတောင်းလျှင်မူ ကတ်ကတ်လန် ရန်တွေ့တတ်ခြင်း 2= imaginary boyfriend များထားပြီး အပြင်လောက တွင် မိမိစိတ်ကူး ထဲက ကောင်လေး သကဲ့သို့ ယောကျ်ားလေးများ ကို ရှာဖွေနေတတ်ခြင်း 3=အဖေ နဲ့ အမေကို အလွန် တွယ်ကပ်ပြီး မိသားစု သာ မိမိဘဝ ဟု ကြွေးကြော်တတ်ခြင်း …
လွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးတတ်တဲ့ ရှားမှရှားတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ တချို့သူတွေက အပြင်ပန်းမှာ မာကျောသလိုထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ်မှာတော့ ထိခိုက်လွယ်၊ ခံစားလွယ်တာကြောင့် လူတွေကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့သူဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းစိတ်ဓာတ်မာကြောပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတတ်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အချစ်ကိုမကိုးကွယ်ဘူး ခိုင်မာတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူတွေဟာ အချစ်ကိုအလေးထားတတ်ပေမယ့် မကိုးကွယ်တတ်ပါဘူး။ အချစ်ကိုဘဝရဲ့ ပထမဦးစားပေးနေရာမှာထားပြီး အရူးအမူးကိုးကွယ်တတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာ ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ (၂) လွယ်လွယ်နဲ့မယိမ်းယိုင်တတ်ဘူး ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ အလွယ်တကူစိတ်မယိမ်းယိုင်တတ်တာကြောင့် တွေဝေတာတွေ၊ တွန့်ဆုတ်တာတွေမရှိပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးရင် ဘယ်သူကမှတားဆီးလို့မရဘဲ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်း မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူ၊ဘယ်အရာကြောင့်မှ မယိမ်းယိုင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ (၃) တစ်ဖက်သားကိုအပြစ်မတင်တတ်ဘူး စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေဟာ တစ်ဖက်သားကိုအပြစ်မြင်၊ အပြစ်တင်တာမျိုးတွေမလုပ်တတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အမှားကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ (၄) လွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တတ်ဘူး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ မရရအောင်ကြိုးစားတတ်တဲ့သူတွေ၊ လွယ်လွယ်လက်မလျှော့တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ …
သိပ်ချစ်ပါတယ်ပြောပြီး ဝေးသွားရမယ့်ဆက်ဆံရေးတွေ ဘဝမှာ တကယ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်…
သိပ်ချစ်ပါတယ်ပြောပြီး ဝေးသွားရမယ့်ဆက်ဆံရေးတွေ ဘဝမှာ တကယ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်… နာနာကျင်ကျင်နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် ပြောပြီး တယောက်တည်း ကြိတ်ငိုရတဲ့ ညတွေငါ့မေတ္တာတွေ သူနားလည်လိမ့်မယ် အထင်နဲ့ အနစ်နာခံပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ နေ့တွေဓားသွား တွေလို ဆုပ်ကိုင်ရင် သွေးထွက် မှန်းသိရက်နဲ့ မလွှတ်နိုင်ပဲ ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လက်တွေမို့ မစာနာတော့ဘူးလားလို့လည်း မမေးရက်ဘူး ကျနော့်ကို ချန်ထားခဲ့လို့ ပျော်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် နဲ့သာ ချန်ရစ်ပါ ကျနော် နေရစ်ခဲ့ပါ့မယ်တယောက်တည်း အယောင်ယောင် အမှားမှားနဲ့ ကျနော်မရှိလဲ အဆင်ပြေမယ့် လူတစ်ချို့အနားက ပျောက်ကွယ်သွား ချင်တယ် ဒီလိုပါပဲ နာနာကျင်ကျင်နဲ့ လွှတ်ချခဲ့ဖူးတဲ့ လက်တစ်စုံကို ပြန်လာနိုးနဲ့ မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ် ( ကျနော် သိပ်ရူးတယ်မို့လား )နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အခွင့်ရေး …
ခ်မ္းသာဖို႕အတြက္ ပိုက္ဆံသံုး ပါ
ခ်မ္းသာဖို႕အတြက္ ပိုက္ဆံသံုး ပါ နည္းနည္းထူးဆန္းသြားလား..? သူငယ္ခ်င္း… ငါတို႕က ခ်မ္းသာဖို႕ ပိုက္ဆံစု ပါပဲ သိခဲ့တာေလ…… သူေဌးဆိုတဲ့ လူတန္းစားေတြကို ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ သူငယ္ခ်င္း…… သူတို႕ဘဝေတြဟာ ခ်မ္းသာၿပီးရင္းခ်မ္းသာေနၾကတယ္…… ငါတို႕ သာမာန္အလုပ္သမားဘဝေတြကို ၾကည့္လိုက္စမ္းပါသူငယ္ခ်င္း….ငါတို႕ေတြဟာ ဆင္းရဲၿပီးရင္းဆင္းရဲေနၾကတယ္….. ဘာျဖစ္လို႕လဲ……. ငါတို႕လို သာမာန္အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဝင္ေငြဟာ ငါတို႕ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ျဖစ္သြားတယ္ ဒါေပမဲ့ သူေဌးေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္ဟာ သူတို႕ရဲ႕ ဝင္ေငြျပန္ျဖစ္သြားလို႕ပဲ သူငယ္ခ်င္း…. Workers spend what they get, Rich men get what they spend… တဲ့ အလုပ္သမား= ဝင္ေငြ to အသံုးစရိတ္ သူေဌး = …
အၿမဲရယ္ေနတတ္တဲ့သူေတြ၊ စကားမ်ားတဲ့သူေတြဟာ အထီးက်န္ဆန္လြန္းတဲ့သူေတြပါတဲ့ေနာ္
အၿမဲရယ္ေနတတ္တဲ့သူေတြ၊ စကားမ်ားတဲ့သူေတြဟာ အထီးက်န္ဆန္လြန္းတဲ့သူေတြပါတဲ့ေနာ္ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ ဒါမွမဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္က အၿမဲတမ္း ရယ္ေမာေနတတ္တဲ့သူေတြလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အၿမဲတမ္းရယ္ေနတတ္တဲ့သူေတြ၊ စကားမ်ားတဲ့သူေတြဟာ အထီးက်န္လြန္းတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္..။ ဒါေၾကာင့္ အၿမဲတမ္းရယ္ေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ စကားအရမ္းမ်ားတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြဆိုရင္ သူမ်ားေတြထက္ပိုၿပီး ေဖးမဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ သတိရပါေနာ္.. (၁) စကားေျပာေဖာ္မရွိဘူး.. အၿမဲတမ္းရယ္ေမာေနတတ္တဲ့သူေတြ၊ စကားမ်ားတဲ့သူေတြဟာ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ စကားေျပာေဖာ္မရွိေလာက္ေအာင္ကို အထီးက်န္ဆန္တဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔ဘဝမွာ အၿမဲတမ္းတစ္ေယာက္တည္းပဲ ျဖစ္ေနေလ့ရွိၿပီး သူငယ္ခ်င္းဆိုတာေတာင္ ခပ္ရွားရွားရယ္ပါ..။ ဒါေၾကာင့္ပဲ သူမ်ားနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါမွာ အထီးက်န္တာကို ခဏေလာက္ေမ့ခ်င္လြန္းလို႔ ရယ္ေမာၿပီး စကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာေနရတာျဖစ္ပါတယ္..။ (၂) မြန္းက်ပ္တယ္.. သူတို႔စိတ္ထဲမွာ မြန္းက်ပ္မႈေတြ အရမ္းမ်ားၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ၊ ရင္ထဲရွိတဲ့အရာေတြကို ေျပာစရာလူမရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တမင္တကာ ရယ္ေနတာလည္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္..။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ …
အခ်ိန္ၾကာလာေလ ပိုလွလာေလပဲ ျဖစ္ေနေစဖို႔ မိန္းခေလးတိုင္း ျပဳလုပ္ရမယ့္ အရာ (၈) ခု
အခ်ိန္ၾကာလာေလ ပိုလွလာေလပဲ ျဖစ္ေနေစဖို႔ မိန္းခေလးတိုင္း ျပဳလုပ္ရမယ့္ အရာ (၈) ခု ပ်ိဳေမတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္တိုင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဂ႐ုစိုက္သင့္ ပါတယ္။ ဒီလို ဂ႐ုစိုက္မွ အသက္ႀကီးေလ ပိုလွေလ အခ်ိန္ၾကာေလ ပိုၾကည့္ေကာင္း ေလျဖစ္မွာပါ။ ပ်ိဳေမတိုင္း လိုလို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ ရမယ့္ ဂ႐ုစိုက္ မႈေလးေတြ ကေတာ့…. (၁) အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္ပါ အခုေနာက္ပိုင္း မိန္းကေလး အမ်ားစုက ေနာက္က်မွ အိပ္တတ္ ပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္ကို သိပ္ဂ႐ုမစိုက္ ၾကပါဘူး။ အိပ္ခ်ိန္မွန္မွန္ ထားဖို႔ကို ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုအေနနဲ႔ေတာင္ သတ္မွတ္ သင့္ပါတယ္ …။ (၂) ကိုယ့္ကိုကိုယ္အခ်ိန္ေပးပါ တစ္ပတ္မွာ တစ္ခါေလာက္ေတာ့ ကိုယ္ႀကိဳက္ …
Previous 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 292 Next